Bilaogera Birmana voaheloka higadra roapolo taona sy enimbolana an-tranomaizina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Febroary 2019 4:20 GMT
(Marihina fa tamin'ny volana Novambra 2008 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy)
Nasehon'ny fitondrana miaramila birmana herintaona taorian'ny nanelezana manerana izao tontolo izao, tamin'ny alàlan'ny aterineto, ny vaovao fidinan'ireo moanina an'arivony an-dalambe nanerana ireo tanandehibe Birmana ho fanoherana ny didy jadona, fa tsy hilefitra amin'ny fanehoan-kevitra manakiana toy izany izay aparitaka manerana izao tontolo izao amin'ny alalan'ny Aterineto ry zareo.
Nosamborina aloha i Nay tamin'ny volana Janoary 2008 saingy navotsotra niaraka tamin'ireo mpanao politika maromaro ao amin'ny Ligy Nasionaly ho an'ny Demaokrasia (NLD) ora vitsy taty aoriana, saingy voasambotra indray andro vitsivitsy taty aoriana. Nanomboka tamin'izay fotoana izay dia notanana tao amin'ny fonjan'i Insein izay malaza ratsy noho ny fampijaliana mampivarahontsana atao amin'ireo gadra politika ao aminy izy.
Tsy navela hiditra tao amin'ny efitrano fitsarana ny renin'i Nay Latt hihaino ny didy fanamelohana ny zanany lahy tamin'ny heloka bevava izay nampoiziny fa ho folo ka hatramin'ny roa ambinifolo taona an-tranomaizina.
Tsy ny reniny ihany no taitra tamin'ny fanameloha azy roapolo taona sy enim-bolana an-tranomaizina fa ny mpisolovava an'i Nay ihany koa .
“Nogadraina ihany koa aza ny mpisolovavan'ilay bilaogera noho ny fanakianana ny fomba fiasan'ny fitsarana manokana”, hoy ny tatitra nataon'ny Reporters without Borders , izay namoaka ihany koa fa voasazy higadra roa taona an-tranomaizina ilay poety malaza Saw Wai noho ny tononkalo iray milaza fa adalam-pahefana ilay mpanao didy jadona Than Shwe.
Inona no dikan'izany amin'ny Lalàmpanorenana izay nolaniana tsy ijerena ny vokatry ny rivodoza Nargi nandravarava tao amin'ny firenena?
Maneho ity antontan-taratasy iray miaro ny seza miisa 110 amin'ireo 440 ho an'ny tafika ity fa mifehy amin'ny fomba hentitra ny toe-draharaha ny fitondrana miaramila ary mikasa ny hanao tsinontsinona ny fanerena iraisam-pirenena atao amin'ny firenena sy ny fanelanelanana ara-diplaomatika nataon'ny Iraky ny Sekretera Jeneralin'ny Firenena Mikambana Ibrahim Gambari.
Manome antoka ny zo fototra ity Lalàm-panorenana toa liberaly sy mazava ity, toy ny fahafahana hanangana antoko politika sy sendikà ary ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety; ny fivavahana sy ny zon'ny vitsy an'isa kosa dia hiaka lavitra ireo lalàna nampiasaina hanamelohana an'i Nay Latt sy Saw Wai.
Amin'ny fiandrasana ny fitsidihan'ny Sekretera Jeneralin'ny Firenena Mikambana, Ban Ki-Moon, hatry ny ela dia ampoizina fa hanao dingana ny fitondrana miaramila izay vonona amin'ny fanakanana ny fanantaterahana izay rehetra fanafahana an'ilay nahazo loka Nobel Aung San Suu Kyi tamin'ny fanagadrana azy tao an-tranony mandritra ny roapolo taona, indrindra moa fa ny fanomezana ny zo izay voarakitra ao amin'ny lalàm-panorenana.
Nanalefaka ny fanafenan-javatra fanaon'ny fitondrana ara-miaramila ny fiarahan'ny fampitam-baovao iraisam-pirenena sy ny hetsiky ny vahoaka tamin'ny zava-nitranga. Toa tsy nahitana hetsika ny avy tamin'ny tafiky ny firenena nankalaza ny tsingerintaonan'i Nargis voalohany, eny fa na dia ny nihatsaravelatsihy fotsiny tamin'ny sanganasany (ny lalàm-panorenana) aza, izay efa ho roapolo taona nifaninanana!